योग कसले गर्ने ? याेगका नियमहरु - Fewa Nepal
अफगानिस्तानको राजधानीमा तालिबानका लडाकु प्रवेश
वनमा घाँस काट्न गएका महत्तोको बाघले खाएको अवस्था
तुइन चढाएर एम्बुलेन्स डोल्पा
त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले हिउँदे बिदा नदिने
च्याउले रातको समयमा चम्किएर पहाडलाई नै झिलिमिली
योग कसले गर्ने ? याेगका नियमहरु
अमानवीय व्यवहार भौतिक विकास शारीरिक अवस्था
मानवीय स्वास्थ्यमा योगको विशेष महत्व रहँदै आएको छ । आत्मा, शरीर र मनलाई एकाकार गर्ने माध्यमको रुपमा समेत योगलाई लिने गरिन्छ । योगको शुरुवात हिन्दू दर्शन अनुसार नै भएको मानिन्छ । जुन हाम्रो पूर्वीय संस्कार हो तर अहिले योग अहिले पूर्वीय दर्शनमा मात्र सीमित छैन । अहिले पश्चिमी देशहरुमा समेत योगको प्रचारप्रसार भइरहेको छ । अमेरिकाका केही विश्वविद्यालयहरुमा अनिवार्य विषयको रुपमा नै योग शिक्षालाई समेट्न काम भएको छ ।
नेपाली भूमीमा पनि योगलाई सबैको पहुँचमा पु¥याउनको निम्ति ऊहाँको महत्वपूर्ण योगदान छ । नेपालमा योगको प्रचारप्रसार गर्ने अन्य विभिन्न व्यक्ति वा समुदायहरु छन् । डा.योगी विकाशानन्द, ओशो लगायतका योगहरु नेपालमा चर्चामा छन् । नेपालको हिमाली क्षेत्रको पाशुपत योगलाई मौलिक योगको रुपमा लिने गरिन्छ ।
योग आफैंमा विज्ञान हो । यसका आफ्नै नियमहरु हुन्छन् । ती नियमहरु राम्रो तवरले पालना गर्न सके योगको माध्यमबाट हाम्रो जीवन सफल र सार्थक बन्न सक्छ । पछिल्लो समय योगको क्षेत्रमा भौतिकवादी व्यक्तिहरु समेत संलग्न छन् । चिकित्सा शिक्षामा लामो अनुभवी व्यक्तिहरु पनि आत्मा शुद्ध गर्नुको अलावा यसको रहस्य पत्ता लगाउनको निम्ति संलग्न रहँदै आएका छन् ।
भौतिक प्राप्तिलाई सुख मान्न सकिँदैन । तर आत्मामा हुने शान्ति वा सन्तुष्टि नै सुख हो । जुन योगबाट नै प्राप्त हुन्छ । योगका विभिन्न प्रकारहरु छन् । त्यसैबमोजिम ती योगले गर्ने कार्यहरु पनि फरक हुने नै भए । हुनतः योगासनहरु निकै धेरै सङ्ख्यामा भएको मानिन्छ । तर मानवीय जीवनमा बढी प्रचलनमा रहेका योगासनहरु भने कमै छन् । अहिलेका मानिसको व्यस्त जीवनमा समय व्यवस्थापनलाई विशेष महत्व दिँदै जीवनलाई तनावमुक्त र स्वस्थ बनाउने त्यस्ता केही योगासनहरु बढी प्रचलनमा रहेको पाउन सकिन्छ ।
कतिपय दीर्घरोगहरु पनि योगको अभ्याससँगै ठीक भएका छन् । विज्ञानको आविष्कार भन्दा माथि रहेको योग क्षेत्र आफैंमा छुट्टै संसार हो । योगको माध्यमबाट मात्रै हामीले आफूलाई र आफ्नो वास्तविक अन्तरनिहित क्षमतालाई चिन्न र बुझ्न सक्छौं ।
प्रतिकुल परिस्थितिमा पनि आफूलाई विचलित नगराई सही मार्गमा हिँड्नको निम्ति योग वरदान सावित भएको छ । सामान्य जीवनमा असम्भव लाग्ने कुराहरु पनि योगको माध्यमबाट सम्भव भएका छन् । यसैकारण योगले विशेष महत्व पाउन सफल भएको हो ।
याेगका नियमहरु :
योगका आफ्नै नियमहरु छन् । योगको क्रममा शारीरिक अवस्था, खानपान लगायतका अन्य वस्तुहरुले पनि विशेष भूमीका खेलेका हुन्छ । तर जथाभावी रुपमा योगको अभ्यास गर्नाले मानिसलाई अन्य समस्याहरु पनि देखिन सक्छन् ।
नेपाल लगायत विश्वभर नै अन्य विभिन्न शारीरिक अभ्यासहरु पनि हुँदै आएका छन् । कतिपयले योग र अन्य शारीरिक अभ्यासहरुलाई एकै किसिमले पनि हेर्दै आएको पाइन्छ । तर योग र शारीरिक अभ्यास एकै प्रकृतिका होइनन् । शारीरिक अभ्यासमा शारीरिक स्फुर्ति र तन्दुरुस्ति मात्र हेरिन्छ भने योगमा शारीरिक अभ्यासको अलावा व्यक्तिको चौतर्फी (सर्वाङ्गीण विकास) र सिङ्गो संसार प्रतिको दृष्टिकोणमा नै परिवर्तन ल्याइदिन्छ ।
मानवीय स्वास्थ्यमा योगको विशेष महत्व रहँदै आएको छ । डिप्रेसनमा परिसकेका र संसारमा बाँच्नुको कुनै अर्थ नै नदेख्नेहरु पनि योगको प्रभावका कारण आफू ठीक भएका मात्र छैनन्, अरुलाई मार्गदर्शन समेत गरिरहेका छन् ।
सभ्य समाज निर्माणको निम्ति हरेकले आफ्नो आचरण सुधार्नु जरुरी रहन्छ । संसारको परिवर्तन गर्न चाहनेले आफैंबाट शुरुवात गर्नुपर्ने मान्यता बमोजिम अघी बढेका व्यक्ति डा. योगी विकाशानन्दबाट पनि हामीले धेरै कुरा सिक्न सक्छौं । आफ्नो मार्गमा अरुलाई हिँडाउन र सबैको भलोको निम्ति आफू स्वस्थ समेत हुनुपर्छ । शारीरिक र मानसिक रुपमा स्वस्थ व्यक्तिले मात्र अरुको निम्ति सोच्न सक्छ । यसको निम्ति आफू पूर्ण रुपमा स्वस्थ र सन्तुष्ट हुनु जरुरी छ ।
मानिसको मन र सोचाइमा नै परिवर्तन ल्याउन सक्ने कुनै माध्यम छन् भने ती भनेका योग र ध्यान नै हुन् । आफुलाई आफैंंले अध्ययन गर्न सिकाउने माध्यम भएको कारण पछिल्ला बर्षहरुमा योगले यति धेरै मान्यता पाउन सकेको हो । मानिसका अधिकांश भौतिक समस्याहरु योगको माध्यमबाट नै समाधान हुन सक्छन् ।
नेपालमा योगको प्रचारप्रसार र विस्तारको निम्ति राजतीय राज्य पक्षले पनि निकै नै प्रभावकारी भूमीका निर्वाह गर्दै आएको छ । सन् २०१५ देखि त विश्वभर नै जुन २१ लाई विश्व योग दिवसको रुपमा नै मनाउन शुरु गरिएको छ । यसले योगको क्षेत्र फराकिलो बन्दै गएको समेत देखाएको छ । पछिल्लो ५-७ बर्षमा योग प्रति मानिसहरुको चेतना निकै नै बढेको छ । यद्यपि नियमित रुपमा विधिपूर्वक योगासन गर्ने मानिसहरु भने अझै पनि कम नै छन् ।
योग कसले गर्ने ?
योग सबैले गर्न सकिन्छ । शारीरिक रुपमा पूर्ण स्वस्थ देखि विभिन्न शारीरिक समस्या भएका व्यक्तिहरु समेतले योगाभ्यास गर्नु जरुरी छ । योग गर्नको निम्ति योग सँग राम्रो ज्ञान भएका व्यक्तिको साहयोग पनि अनिवार्य हुन्छ । जथाभावी रुपमा योग गर्दा यसले अन्य समस्या पनि निम्तन सक्ने भएको कारण योग गर्ने क्रममा विशेष सतर्कता अपनाउनु जरुरी रहन्छ ।
यद्यपि योगका आसनहरु मध्ये कतिपय आसनहरु गर्दा त्यसका फाइदा र बेफाइदा के छन् भन्ने कुरा पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । कुनै आसनहरु विशेष शारीरिक समस्या भएका व्यक्ति, गर्भवती लगायतलाई उपयुक्त मानिँदैनन् । ती आसनहरु गर्ने क्रममा राम्रो सँग बुझ्नु अनिवार्य हुन्छ ।
अहिले आएर योग व्यापक बनिसकेको छ । प्राकृतिक रुपमा नै बाँच्न सिकाउने र प्रकृतिमा नै हाँस्न सिकाउने माध्यम समेत बनेको योग
अहिलेको आधुनिक समयमा मानिसहरु प्रविधि र मेसिनको गतिमा काम गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सृजना भएको छ । यस्तो अवस्थामा मानिसहरु मेसिनकै गतिमा घोटिनुपर्दा मानसिक रुपमा निकै नै तनावग्रस्त हुँदै गएको छ । मानिसमा दिनानुदिन नयाँ नयाँ रोगहरु समेत देखिँदै आएका छन् । प्रविधिको विकास सँगै मानिसहलाई भौतिक रुपमा जति सहजता प्राप्त भएको छ । त्यति नै मानिस विभिन्न समस्याहरुबाट निकै नै जटिल परिस्थिति सामना गर्न पनि बाध्य छ ।
एकातिर भौतिक विकासले आकाश त चुमेको छ तर सँगसँगै हाम्रा परम्परागत मान्यताहरु, सहयोग, सद्भाव र आत्मियता भने हामीबाट टाढा हुँदै गएको छ । भौतिक रुपमा हामी सम्पन्न र समृद्ध त बनेका छौं । तर हाम्रो भौतिक सम्पन्नताले मात्र हामी सन्तुष्ट बन्न सकेका छैनौं । अहिले मानिसको मन निकै नै चञ्चल बनेको छ ।
हजुरबुबा देखि नातीनातिनी सम्म सबै एउटै परिवारमा संयुक्त रुपमा बस्दै आएको पुस्ता खण्ड खण्ड भएको छ । यसले गर्दा मानिसमा विभिन्न किसिमका समस्याहरु देखिइरहेका छन् । मानिस बाहिरबाट देख्दा मात्र सन्तुष्ट छ । तर भित्री रुपमा भने उसँग अनेकौं पीडाहरु छन् । निकै नै असन्तुष्ट छ । यी र यस्तै अनेकौं समस्याहरु अहिलेको हाम्रो समुदायका कटु वास्तविकता हुन् । जसले हाम्रो समाजलाई निकै नै कुरुप बनाइरहेको छ ।
समाजमा विभिन्न किसिमका अमानवीय व्यवहारहरु बढ्दै गएका छन् । हत्या, हिंसा जस्ता कार्यहरुमा मानिस बिना हिच्किचावट लाग्दै गएको छ । यहाँ सम्म कि समयको परिस्थिति यस्तो बन्यो कि मानिसले के सही र के गलत भन्ने नै छुट्याउन नसक्ने अवस्था सृजना भइसकेको छ । यसले गर्दा समाजमा आत्महत्याका घटनाहरु बढ्दैछन् । आपराधिक क्रियाकलापहरु बढ्दै गएका छन् । सभ्य र सुसंस्कृत समाजको हामीले परिकल्पनागर्न सकेका छैनौं ।
परिवारको एकता र भातृत्व हराउँदै गएको अहिलेको परिस्थितिमा सबैलाई एकीकृत गर्न सक्ने माध्यम भनेको आध्यात्मिक दर्शन हो । अध्यात्म अन्तरगतकै एउटै पक्षको रुपमा रहेको योग यी सबै समस्या समाधानको निम्ति एकमात्र निर्विकल्प उपाय हुन सक्छ ।
अहिलेका मानिसहरुसँग समय थोरै छ । थोरै समयमा नै धेरै काम गर्नुपर्ने महत्वाकांक्षा लिएर मानिस मैदानमा निस्किएको हुन्छ । यद्यपि सबै आकांक्षाहरु पूरा नहुन सक्छन् ।
बिहान छिटो उठ्नुको फाइदा के-के हुन थाहा पाउनुहोस्
चिसो मौसममा खान नहुने के-के हो ? थाहा पाउनुहोस
खाली पेटमा मनतातो पानी पिउनुका फाइदा
काजु नियमित सेवन गर्दा हुने फाइदा
© 2021: Fewa Nepal मा सर्वाधिक सुरक्षित छ । बिज्ञापन | सम्पर्क | हाम्रो बारेमा